September 2021 – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on म जापानमा रेष्टुरेण्टको शौचालय पनि सफा गर्थे, म त्यहाँ कलाकार गौरी मल्ल थिइन (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । अभिनेत्री गौरी मल्लले फिल्ममा जस्तो अभिनय गरिन् उनको ब्यक्तिगत जिवन पनि त्यतीकै रोचक र म–र्मस्प—र्शी छ । उनी केही समय अघि नेपालमा पाएको कलाकारीताको चर्चा, फेम सबै छोडेर जापान गएकी थिइन् ।
म जापानमा एक्लै बेञ्चमा बसेर विरालोसंग खेल्दै रमाउने गौरी मल्ल वास्तविक गौरी मल्ल हो । मैले आफुले आफैलाई चिन्ने मौका पाए । उनले टोकियोमा नेपाली रेष्टुरेण्टमा काम गर्दा इन्डियन खानाका सबै परिकार पकाउन सिकेको पनि बताएकी छन् ।aranikotimes बाट
No Comments on भाटभटेनीमा भेटियो अनियमितता, चिनी, खाने तेलमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज १५ गते शुक्रबार, भोलि तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज १५ गते शुक्रबार, भोलि तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भोलि श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज १५ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर १ तारीख आश्विन कृष्णपक्ष दशमी तिथी तिष्य नक्षत्र शिव योग वणिज करण चन्द्रमा कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा उत्पात योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु फर्पिङमा हरिशंकर यात्रा दशमी श्राद्ध अन्तराष्ट्र्यि वृद्ध(वृद्धा दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
यूकेमा चरम इन्धन संकट ! रोनाल्डोको ३५ करोडको बेन्ट्ली कार केही दिनयता पेट्रोलविहीन
No Comments on यूकेमा चरम इन्धन संकट ! रोनाल्डोको ३५ करोडको बेन्ट्ली कार केही दिनयता पेट्रोलविहीन
बेलायतमा यतिबेला चरम इन्धन सं’कट छाएको छ। जसका कारण यतिबेला देशभर सेनालाई पेट्रोल, डि’जेल लगायतका इन्धन आपूर्तिको लागि खटाइएको समाचारहरु आएका छन्।
इन्धनको अभाव हुँदा जहाँ पेट्रोल पाइन्छ त्यहाँ घन्टौं लगाएर कार, बाइक तथा अन्य सवारीले पेट्रोल तथा डिजेल भर्दछन्। इन्धनको अभाव भएर त्यहाँ संकट छाएको भने होइन। वास्तवमा इन्धन ट्यांकरका सवारी चालकको अभावले बेलायतमा इन्धन सं’कट छाएको हो।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार हाल बेलायतलाई १ लाख ड्राइभरको आवश्यकता छ। कोरोनाका कारण र बेलायत ईयूबाट बाहिरिएसँगै त्यहाँका सवारी चालकहरुले बेलायत छा’ड्दा इन्धन पेट्रोल पम्पसम्म नपुगेका हुन्। कमै मात्रामा चालक भएपछि देशभरका पेट्रोल पम्पहरुमा इन्धन नपुगेपछि त्यहाँ इन्धन सं’कट छाएको हो।
रोनाल्डोको कारमा छैन पेट्रोल-यसैबीच बेलायती फुटबल क्लब म्यानचेस्टर यु’नाइटेडका स्टार खेलाडी क्रि’स्टियानो रोनाल्डोको २ लाख २० हजार पाउन्ड अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँ पर्ने बे’न्ट्ली कार पनि पेट्रोल विहीन भएको छ।रोनाल्डोको कारमा केहीदिनयता पेट्रोल नभएको डेलीमेलले जनाएको छ।
रोनाल्डोका ड्राइभरले बुधबार ७ घण्टा पेट्रोलको लागि लाइनमा बस्दासमेत पेट्रोल सकिएका कारण इन्धन भर्न नपाएको समाचारमा जनाइएको छ। पेट्रोल अभाव हुँदा त्यहाँ ट्यांकी भर्नेगरी पेट्रोल हाल्न नदिइने नियम पनि बनाइएको छ।
जस्ले ७३ यात्रुको ज्यान बचाए उनैलाई नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले कार’बाही गर्यो किन?
No Comments on जस्ले ७३ यात्रुको ज्यान बचाए उनैलाई नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले कार’बाही गर्यो किन?
काठमाडौं असोज १४ / नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले बुद्धएयरका पाइलट आङ्गेलु शेर्पालाई उडान भर्न रोक लगाएको छ। घ’टनाको छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि विमान चलाउन रोक लगाइएको बुद्धएयरले जनाएको छ।
’गत सोमबार काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्धएयरको विमान त्यहाँ अवतरण गर्ने क्रममा ल्याण्डिङ गियर इन्डिकेसनमा स’मस्या देखिएपछि काठमाडौंमा सुरक्षित ‘नर्मल’ अवतरण गरिएको थियो। सो विमान पाइलट आङ्गेलु शेर्पाले चलाएका थिए।
विराटनगर अवतरण गर्ने क्रममा ल्याण्डिङ गियर इन्डिकेसनमा समस्या देखिएको र टावरले पनि गियर नझरेको जानकारी दिएपछि चालकले जहाज काठमाडौं फर्काइएको थियो।बुद्धएयरको नाइन एन-एएनआइ कल साइन भएको जहाजमा ६८ वयस्क, २ बच्चा, ३ जना इन्फ्याण्ट गरी ७३ यात्रु रहेका थिए।
सोमबार बिहान ८:३० बजे बुद्ध एयरको विमान काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको थियो। विराटनगर एयरपोर्टमा ल्यान्डिङका क्रममा जहाजको गियरमा समस्या आएपछि पुनः काठमाडौं फर्काइएको थियो। सो विमानमा ७३ यात्रु सवारी थिए।
No Comments on दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, यी काम गर्न प्रतिबन्ध
काठमाडौं जिल्लामा अनावश्यक रुपमा भीडभाड, मेला महोत्स र सभा जुलुस आदि गर्न नपाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आज (बिहीबार) राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सो निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालद्वारा जारी आदेशमा घर बाहिर मानिसहरु जम्मा हुन नपाउने, भीडभाड गर्न नपाउने, सभा जुलुस गर्न नपाउने। जात्रा महोत्सव र भोज आदि गर्न नपाउने भनिएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेको हुँदा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको प्रजिअ रिजालद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको समयमा बढी भी’डभा’ड एवं जोखिमयुक्त क्षेत्रहरु एवं यात्रा गर्दा हुन सक्ने चोरी, ठगी, लु’टपा’टजन्य गतिविधिबाट सर्वसाधारण सचेत रहनने, यात्रा गर्दा आधिकारिक टिकट काउण्टरबाट मात्र टिकट लिएर यात्रा गर्ने तथा सवारी साधनको छतमा यात्रा गर्न नपाउने पनि आदेशमा भनिएको छ ।
यसकारण बुद्ध एयरका पाइलट आङ्गेलु शेर्पालाई उडान भर्न रोक
काठमाडौं । बुद्ध एयरका पाइलट आङ्गेलु शेर्पालाई उडान भर्न रोक लगाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले घटनाको छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि विमान चलाउन रोक लगाएको हो ।
घटनाको छानविन भइरहेकाले तत्कालका लागि पाइलट शेर्पालाई उडान भर्न रोक लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भनेको छ, ‘घटना छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि पाइलट शेर्पालाई उडान नर्भन भनिएको हो । यो नियमित पक्रिया हो ।’
गत सोमबार मात्र काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्धएयरको नाइन एन–एएनआई कल साइन भएको विमान त्यहाँ अवतरण गर्ने क्रममा ल्याण्डिङ गियर इन्डिकेसनमा समस्या देखिएपछि काठमाडौंमा सुरक्षित अवतरण गरिएको थियो ।
पाइलट आङ्गेलु शेर्पाले उडाएका उक्त विमानमा ६८ वयस्क, २ बच्चा, ३ जना इन्फ्याण्ट गरी ७३ यात्रु रहेका थिए ।
No Comments on आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी दशैँको मुखमै काठमाडौँमा लागु भयो यस्तो कडा नियम, सबैले अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने (सूचना सहित)
जारी आदेश जारी गर्दै घर बाहिर मानिसहरु जम्मा हुन नपाउने, भिडभाड गर्न नपाउने, सभा जुलुस गर्न नपाउने, जात्रा महोत्सव र भोज आदि गर्न नपाउने भनिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भाइरसको संक्रमण अझै जारी रहेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर चाडपर्व (दशैं, तिहार र छठ)मनाउन आग्रह गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोबिन्दप्रसाद रिजालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नजिकिदै गरेको चाडपर्वलाई सुरक्षित तरिकाले मनाउन आग्रह गरेका हुन्।
होटल, रेष्टुरेण्ट र सिनेमा हलमा सामाजिक दुरी कामय गर्नुपर्ने आदेश जारी गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै प्रशासनले भिडभाड र जुलुस तथा भोज गर्न रोक लगाउने पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ ।
दशैं, तिहार र छठ पर्व मनाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर न्युनतम सहभागितामा चाडपर्व मनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ । घरभित्र परिवारको सदस्यहरु मात्रै सहभागी भएर पर्व मनाउन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासनले भनेको छ– ‘यात्रा गर्नुअघि अधिकारिक टिकट काउण्टरबाट टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्नुहोला ।’
निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय ढुवानी बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक निर्माण सामग्री बेलुका ९ बजेबाट बिहान ५ बजेसम्म मात्र ढुवानी गर्न पाइने निर्णय गरिएको छ ।
No Comments on यसकारण बुद्ध एयरका पाइलट आङ्गेलु शेर्पालाई उडान भर्न रोक
अस्पताल भर्ना भएका माधव नेपालको अवस्थावारे आयो यस्तो जानकारी
No Comments on अस्पताल भर्ना भएका माधव नेपालको अवस्थावारे आयो यस्तो जानकारी
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । बुधवार साँझ अस्पताल भर्ना भएका नेपालको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ ।
अध्यक्ष नेपाललाई ज्वरो र खोकीको समस्या देखिएपछि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि, शिक्षण अस्पतालमा बुधबार भर्ना गरी उपचारका क्रममा रहेका छन् ।
अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सामान्य कुरा गर्न थालेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता जीवनराम श्रेष्ठले अध्यक्ष नेपालको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष नेपाललाई केही दिनमै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा।सन्तकुमार दाससहितको टोली पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको उपचारमा संलग्न छ ।
एमसीसी बारेमा गलत प्रचार गरियो :परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)बारे आफूले अमेरिकामा बोलेको कुरालाई गलत प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिएर बिहीबार नेपाल फर्कने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै खड्काले परियोजनाको बारेमा आफूले नबोलेको कुरा प्रचार गरिएको बताएका हुन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२९ भदौं २०७४ मा हामीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो अहिले संशोधन गरौं भन्दा एमसीसी लागू भएका अन्य देशहरुले के भन्छन् अन्य देशहरूले ४२, ४५ देशहरूले पनि त्यसै गरौ भन्छन् कि ! हामीले एकचोटि सही गरेर संशोधन गरौं भन्दा अन्य देशहरूले पनि त्यसै भन्छन् कि भनेर चाहिँ मैले बोलेको हो।
मन्त्री खड्काले गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमसिसी नेपाल सरकारले मागेको परियोजना भएकाले संशोधन नहुँने उल्लेख गरेका थिए। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही असोज ८ गते न्युयोर्क पुगेका मन्त्री खड्काले सभालाई सम्बोधन गर्नका साथै भारत, बङ्गलादेश, कुवेत र बहराइनका विदेशमन्त्रीहरू क्रमशः एस जयशङ्कर, अब्दुल मोमेन, शेख अहमद नासिल अल मोहमद अलसवाह र अब्दुल लतीफ बिनसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए
दशैं-तिहारको मुखैमा पत्याउनै नसकिने गरि घट्यो खसिको बोकाको मासुको मुल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो
No Comments on दशैं-तिहारको मुखैमा पत्याउनै नसकिने गरि घट्यो खसिको बोकाको मासुको मुल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (खाद्य संस्थान)ले प्रतिकिलो ५६० रुपैयाँमा खसी तथा बोकाको मासु बिक्रीवितरण गर्ने भएको छ ।
यस वर्षको दशैंका लागि दाङ र मकवानपुरको मजवानपुरबाट पहिलो पटक खसी तथा बोका काठमाडौं आइपुगेपछि कम्पनीले मूल्य निर्धारण गरेको हो
माक्स नलगाएकाहरु अब काठमाडौमा गाडी चढ्न पनि नपाउने, अरु के छन् नयाँ नियम
काठमाडौ । दिनहुँ बढ्दै गएको भिडभाड र असावधानीका कारण उपत्यकामा फेरी संक्रमणको जोखिम बढेको छ । चाडपर्व नजिकिएसंगै सर्वसाधारणको भीड वजारमा देख्न सकिन्छ । अधिकांशले माक्स समेत लगाएको देखिदैनन् । अब काठमाडौंमा मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार आदेश जारी गर्दै यस्तो कडाइ गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालद्वारा जारी आदेश अनुसार चालकले मास्क, भाइजर र पञ्जा अनिवार्य लगाउनुपर्ने छ भने सवारी साधनको ढोकामा अनिवार्य सेनिटाइजर राख्नुपर्ने छ । कुल सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्न पनि प्रशासनले रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै आजैदेखि अनावश्यक रूपमा भिडभाड, मेला र महोत्सव गर्न पनि नपाइने भएको छ । घर बाहिर मानिसहरू जम्मा हुन नपाउने, भिडभाड गर्न नपाउने, सभा जुलुस गर्न नपाउने, जात्रा महोत्सव र भोज आदि गर्न नपाउने उल्‍लेख छ । बैठक गोष्‍टठी, सेमिनारहरू गर्नु परे भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने उल्‍लेख छ ।
यदि गर्नै पर्ने भएमा स्वास्थ्य मापदण्‍डको पालना गर्नुपर्ने उल्‍लेख गरिएको छ । कोभिड १९ को संक्रमण कायमै रहेकाले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरू पनि सांकेतिक रूपमा मात्रै मनाउन आदेशमा भनिएको छ ।